Unjingalwazi uMary Abukutsa-Onyanko malunga nokushicilelwa kwe-OA noKhuseleko loKutya- iAfrikaArXiv
E papashwe ngu NguJorem on 19I Disemba 2019 19I Disemba 2019
Ekuqaleni kukaDisemba ka-2019, uProf Abukutsu-Onyanko wazisa ngomsebenzi wakhe e I-UTC-SPARC i-Afrika evulekileyo yokufikelela kwi-Symposium ka-2019 Icmposium eKapa, ​​eMzantsi Afrika.
Omnye wabaphandi abadumileyo bezolimo zase-Afrika, uNjingalwazi uMary Abukutsa-Onyango uza kwabelana ngamava akhe egxininisa ukuba ukufikelela kulwazi kubalulekile kuphuhliso. # OASymp2019 #SPARC #SPARCAfrica #openaccess #openuct #izibalo #wacren #Ikapa pic.twitter.com/NzCgyKwYKW
-UCT-SPARC Afrika (@SPARCAfrica) Novemba 22, 2019
Jonga umboniso kwi Zenodo:
Malunga neshumi leminyaka eyadlulayo, Leslie Chan kwaxoxwa Unjingalwazi uMary Abukutsa malunga nomsebenzi wakhe njingalwazi wezoLimo kuKhuseleko loKutya kunye neMifuno yeMveli yase-Afrika.
Iijenali zokufikelela ezivulekileyo azinakugwenywa. Zibaluleke kakhulu ngeli xesha. […] Xa sisenza uphando, ayisiyongqondo ukuba uyigcina phantsi kwetafile okanye kwigumbi lokuhlala. Kufuneka sabelane ngolwazi, uphando esilwenzayo- nokuba luncinci kangakanani - ukuba nje lunokuba nefuthe kuphuhliso, kwindlela abahlali nabajonga ngayo abantu.
Unjingalwazi uMary Abukutsu-Onyango
Bukela udliwanondlebe olupheleleyo apha:
iindidi:	UkuFikelelaUnxibelelwano lwezobuNzululwazi
tags: Imifuno yemveli yaseAfrikaUkhuseleko lokutyaVula iiJenali zokuFikelela
Umlawuli olawulayo we-TCC Afrika kunye neqela lephulo leAfroArXiv uJoy Owango uthethile noluntu lwase-Afrika ngeemodeli zalo, amabhongo kunye nemeko yangoku yemfundo ephezulu kunye nophando kwi-sub Saharan Africa. Ipapashwa kuqala kwi-africabusinesscommunities.com/ ....../ Funda ngokugqithisileyo…
'Iiseva ezithandwayo zokuvalelwa kobuso zivalekile ngenxa yeengxaki zemali' 1 Iphepha 2020, doi: 10.1038 / d41586-020-00363-3 Le yintloko yeli phetshana leNqaku leNdalo elenza ingxelo malunga neefizi zeenkonzo ze-OSF. I-AfricArXiv ilapha Funda ngokugqithisileyo…